Sida loo dayactir SD Error Qaabka Card?
Fix SD Card Aan formatted baadida 3 Talaabooyinka
1 Sida loo dayactir SD Error Qaabka Card?
Waxaan qaatay boqolaal sawirada kaarka SD 16GB in camera aan intii aan fasax. Hadda marka aan ku saabsan si ay u isticmaalaan kaadhka on my computer oo aan computer aqoonsan yahay kaarka laakiin anigu ma aan heli karo. Kombiyuutarku wuxu ii sheegay kaarka SD lama formatted. Anigu ma waxa aad u qaab karo. Ma jiraa wax aan ka soo laabtay card SD heli karaa sawirka? Best xiriira.
SD baadi qaab card dhaca inta badan sababta oo ah nidaamka kaadhka jebiyey / musuqmaasuqa, formatting aan habboonayn, jeermiska fayraska ama sababo kale. Mararka qaarkood waxaad xitaa ma qaab karaan kaarka. Marka aad "card SD aan formatted, ma doonaysaa in ay haatan qaab", waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay badiyay dhammaan faylasha kaarka SD, maxaa yeelay, mar dambe ma aad iyaga ka heli karaan. Laakiin sidaas maaha run ahaantii runta.
No arrin aad go'aansato in aad u qaab ama ma, tahay badan tahay inuu ka soo kabsado xogta ka dib markii kaadhka SD qaab qalad la barnaamij soo kabashada xogta inta aad aan gelin wax xog cusub in kaarka SD aad. Faylal ay kaarka SD yihiin oo kaliya calaamadeeyay xogta sida geli karin oo aad si fudud u soo kartaa qaladka qaab barnaamij soo kabashada xogta card SD sida Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Barnaamijka Tani waxay si habboon hagaajin kartaa kaarka SD aad qalad aan formatted iyo soo celinta dhammaan macluumaadka ku yaal sida asalka ah. Waxaa aad u saamaxaaya in ay ka bogsanayaan oo dhan cayn kasta oo files ka dib qalad card SD ma formatted, oo ay ku jiraan images, files audio, videos, document files, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka si uu u xaliyo qaab baadi card SD hadda ah.
2 Fix SD Card Aan formatted baadida 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Marka kaarka SD uu aqrinayo ma formatted Baadi, sida ugu fiican ee aad wada xajisaan xog ammaan ah waa in la joojiyo waxba qaban kaarka, inkasta oo aad weli soo kaban karto xogta xitaa haddii aad go'aansato in aad qaab kaarka. Oo xogta lumay si fudud loo overwritten karaa iyadoo xogta cusub ee kaarka.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ka soo kabsado xogta ka dib qalad qaab card SD ah
Aan isku dayno qamaar baadi card SD ma formatted la Windows version of Wondershare Data Recovery.
Kadib markii ay barnaamijka on your computer, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka soo bandhigayaa sida hoos. Waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 Sawirka card SD si aad u eegto files waxa ku
Barnaamijku wuxuu ku tusi doonaa warqad drive kaarka SD ee suuqa kala ah, oo aad dooran kartaa oo guji "Start" in ay oggolaadaan in barnaamijka faylasha scan ku yaal.
Haddii aad horay u formatted kaarka, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka dib qalad qaab card SD
Marka iskaanka ay ka badan tahay, ka helay files ku qoran kaarka SD baadi qaab lagu soo bandhigi doonaa "Jidka" iyo "File Type" qaybood uu furmo.
Fadlan u aragto magacyada file ama sawiro Falanqeynta / waraaqaha si aad u hubiso sida badan oo files ku qoran kaarka SD baadi qaab la soo kabsaday karo.
Ugu dambeyntii, waxaad karo files oo guji "Ladnaansho" si uu u xaliyo card SD qalad aan formatted oo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii xogta soo kabsaday dib ugu card SD aad isla markiiba ka dib si aad uga fogaato xogta overwritten.
> Resource > Ladnaansho Error> Sida loo dayactir SD Card Aan formatted